Inkovana - Izinyoni - Iningizimu Afrika
Inkovana ngesinye sezikhova ezincane eNingizimu Afrika. Ayinazo izindlebe. Inenhloko ensundu nombala omhloshana ebusweni. Kwesingenhla umzimba unsundu namachashaza amaningi amhlophe. Kwesingezansi kwande umbala omhlophe kunonsundu kanti inamehlo aphuzi.
Inkovana idla izinhlobo eziningi zokudla njengamagundwane, izinambuzane namalulwane. Ikwazi nokubamba ijuba elingamagremu angama-200, yize yona ingamagremu angama-85 isisindo. Ivame ukudla izilwane ezingenamathambo kodwa izinzwane zayo eziqinile zenza ikwazi ukubamba izinyoni, izilwane ezincelisayo ezincane nezinyoka.
Inkovana izalela amatshwele phakathi kukaNcwaba noLwezi zombili eyesilisa neyesifazane ziyasizana ngokufukamela amaqanda izinsuku ezinama-31. Ibekela amaqanda amabili kuya kwamathathu emigodini embeke ezihlahleni. Ifukamela amaqanda izinsuku ezingama-29 achamisele emuva kwezinsuku ezingama-31. Emuva kwamasonto ambalwa amachwane asuke esekwazi ukuzimela
Indlela Ephila Ngayo
Lolu hlobo lwesikhova lundiza emini. Ikhwelo lenkovana elehlukile livame ukuzwakala emahlathini anezihlahla ezinameva. Zindiza ngambili noma ngayodwa. Le nyoni inemibala ongathi amehlo esiphundu okwenza izitha sidideke ukuthi ibheke ngakuphi.
Indawo Ezihlala Kuyona
Zithokala ezindaweni emathafeni nasemahlathini angaminyene. Ziyazigwema izindawo ezinotshani obude, izindawo ezuwugwadule namahlathi aminyene.
Zandile emathafeni nasemahlathini angaminyene eningizimu ye-Afrika lapho zibonakala khona unyaka wonke. Zithokala ezindaweni evulekile emahlathini ahlakazekile lazibonakala khona unyaka wonke. Inkova yisona sikhova esivame ukubonakala kakhulu emini ukuzedlula zonke eningizimu ye-Afrika. Zivame ukubonakala zihamba ngambili noma ngasodwana.